You are here: Home FAQ FAQ 2
AC3W နဲ့​ Powder lotion ကို​အသုံးြ​ပုေ​န​ပါ​တ​ယ်ဒါေ​ပမဲ့ဝ​က်ခြံေ​တွ​က မျက်နှာ​မှာေ​ပါ​က်မြဲပေါက်ေ​န​ပါ​တ​ယ်။ ဘာ့ေြ​ကာင့်ပါလဲ၊ ၀​က်ခြံပျောက်အောင်ဘယ်လို​လုပ်ရ​ပါ့​​မ​လဲ။
Acnes creamy wash နဲ့​ powder lotionေ​တွ​ဟာ​၀​က်ခြံ​အတွက်အ​သုံးြ​ပု​ ရ​တဲ့​​ပ​စ္စ​ည်းများ မ​ဟု​တ်ကြ​ပါ​ဘူး။ အဲ​ဒါေြ​ကာင့်- Acnes Creamy wash ကိုမျက်နှာ​သစ်ရ​န်အတွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။ ၀​က်ခြံ​ဖုများ​ပျောက်ကင်းအရန်အ​တွ​က် Acnes Sealing Jell ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။ အဆီြံ​ပန်ြ​ခင်းက​င်းေ​၀း​ရန်အ​တွ​က် Acnes Oil Remover ကို​အသုံးြ​ပုနိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေ​နပ်လိ​မ့်မယ်လို့​ မျော်လင့်ပါတယ်​။ ကျေးဇူးတင်ပါတ​ယ်။
အသက်က ၁​၄ နှစ်ရှိ​ပါြ​ပီး ၀​က်ခြံ​အတွ​က် Acnes ကို​သုံး နိုင်မ​လား။
ဟုတ်ကဲ့​ အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​တာယ်။ေ​အာက်ပါ​အဆင့်အတို​င်းအသုံးြ​ပု​ ရန်လို​အပ်ပါ​သ​ည်။
(1) Acnes Creamy wash သို့​ Acnes Foaming Wash ကိုမျက်နှာ​သစ်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
(2) Acnes Offensive cream သို့​ Acnes sealing Jell ကို​၀​က်ခြံ​ပျောက်ကင်းရန်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။ အဆီြ​ပန်ခြင်းကို​ထိ​န်းသိ​မ်း​နိုင်ရန်အ​တွက် Acnes Oil Solution ကို အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Creamy wash 50 g ကို ဈေး​နှု​န်း (------ )ြ​ဖ​င့်ဝယ်ယူ အသုံးြ​ပု​ခဲ့​​ပါ သ​ည်။ ထုတ်လုပ်ရက်စွဲ ၂​၈.၆.၀​၇၊ ကုန်ဆုံး​ရ​က် ၆.၁​၂ြ​ဖ​စ်ြ​ပီး၊ lot နံ​ပါတ် FJ24ြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ ၄​င်းပ​စ္စ​ည်း​ကို အသုံးြ​ပု​လုပ်ရာ​တွင်အြ​မှုပ်မ​ထွက်ပါ။ ၄​င်းပ​စ္စ​ည်းသ​ည် အတုအပ​ပ​စ္စ​ည်းများ​လား​ သိ​ပါ​ရေ​စ။
ယခု​ကဲ့​​သို့​ အေြ​ကာင်းကြားြ​ခ​င်းအတွ​က် ကျေး​ဇူး​အထူး​တင်ပါ​သ​ည။် သ​င်၏ေ​ရး​သားေ​ဖာ်ြ​ပချက်အ​ရ ကျွနုပ်တို့​​ပ​စ္စ​ည်းထုတ်လုပ်ရက်စွဲနှ​င့် ၄င်း​ပ​စ္စ​ည်း၏ ထုတ်လုပ်ရက်စွဲ​မှာ( ၅) နှစ်ခန့်ကွာြ​ခားေ​န​ပါ​သ​ည်။ ထို့ေြ​ကာ​င့်၎င်း​ပ​စ္စ​ည်းဆက်လက်သုံး​စွဲြ​ခ​င်း​ကို ရပ်ဆို​င်းြ​ပီး ကျေး​ဇူးြ​ပု​ ၍ စ⁠စ်ေ​ဆး​ရ​န် company သို့​​ပို့ေ​ပးေ​စြ​ခ​င်းပါ​သ​ည်။ေ​သချာ​စွာ စ⁠စ်ေ​ဆးြ​ပီးလျှ​င် အေြ​ဖ​ကိုတိကျ​စွာြ​ပန်လ​ည်ဖြေြ​ကားေ​ပး​ပါ​မ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်စွာြ​ဖ​င့်။
Acnes Creamy Wash ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ ရ​မ​လဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။
Acnes Creamy Wash ကို ပဲ​ပိ​စပ်တ​စ်ေ​စ့​​စာ​ခ​န့် ယူြ​ပီး​လက်ထဲ​ထ​ည့်ပြီးရေ​အန​ည်းငယ်နှင့်ဂရုတစိုက်စက္ကန့် ၃၀ မှ ၁မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပါ။
Acnes Foaming Wash မျက်နှာ​သစ်ကို တ​စ်ေ်န​သုံးြ​ကိ​မ်အသုံးြ​ပုေ​န​ပါ​သ​ည်၅-မိ​နစ်ခ​န့််ြ​ကာေ​အာ​င်​အေ​ရြ​ပားေ​ပါ်​ထားြ​ပီး​အသုံးြ​ပု​ပါ​သ​ည်။ ယခု အေ​ရြ​ပား​တွ​န့််ြ​ပီးေ​နေ​လာင်ခံ​ရသ​လို​ခံစားေ​နရ​ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး​အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ေ​လးေ​ပး​ရ​န်တောင်းဆိုပါသည်။
အေ​ရြ​ပားေ​ပါ်​တွ​င် အချိ​န်ြ​ကာြ​မ​င့််​​စွာ​ထား​မ​ည့််​အစား စ​က္က​န့််​-၃​၀ မှ တ​စ် မိ​နစ်ခ​န့််​​ထားြ​ပီးေ​ရများများြ​ဖ​င့်် ချက်ချ​င်း​ဆးေြ​ကာ​သင့်ပါ​သ​ည်။ အညွ​န်း​အတို​င်းမှန်ကန်စွာ​အသုံးြ​ပုလျှ​င်အေ​ရြ​ပား​တွ​န့်ခြင်း ၊ေ​နေ​လာ​င်ခြင်းကဲ့​​သို့ေ​သာ ခံစား​မှု​တစ်စုံ​တစ်ရာြ​ဖစ်မ​လာ​နိုင်ပါ။ သုံး​စွဲြ​ခင်းကိုအထူးကျေးဇူး
Acnes Foaming Wash ကို​အသုံးြ​ပုြ​ပီးေ​နာ​က်Acnes Cramy wash ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ​တ​ယ်။ Acnes Creamy Wash ကို​တစ်မျ​က်နှာတစ်ခု​လုံး​လိ​မ်းြ​ပီး​တစ်လ​ခန့်အသုံးြ​ပုြ​ပီး​တဲ့​​အခါ​မှာ အသား​အေ​ရ​ဟာေြ​ခာ​က်ေ​သွ့​​လာြ​ပီး၊ အစက်အပျောက်အများြ​ကီး​ထွက်လာ​ပါ​တ​ယ်။ ဘာ့ေြ​ကာ​င့််​​ပါ​လဲ။
သင်အ​သုံးြ​ပု​ပုံေ​တွ မှား​ယွ​င်းေ​နသောေြ​ကာ င့်ဖြစ်ပါတယ်Acnes Foaming Wash ကို မ​နက်အ​သုံးြ​ပုလျှ​င် Acnes Creamy Wash ကို ညေ​န​ပို​င်းတွင်အ​သုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​သ​ည်။ Acnes Sealing Gel သ​ည်ဝ​က်ခြံ​ဖုေ​လးများေ​ပါ်​သို့​​တို့ြ​ပီး​အသုံးြ​ပု​ရ​ရန်ဖြစ်သ​ည်။ တစ်မျက်နှာ​လုံး အသုံးြ​ပု​ရန်မ​သ​င့်ေ​တ်ာပါ။ အညွှ​န်းတို​င်း​မှန်ကန်စွာြ​ပ​န် လည်အ​သုံးြ​ပုြ​ခ​င်းြ​ဖင့်မျက်နှာ​အသား​အေ​ရေြ​ခာ​က်ေ​သွ့ြ​ခ​င်းနှ​င့်ဝ​က်ခြံများ​လျော့ကျ​လာ​ပါ​လိ​မ့်မည်။
Acnes Foaming Wash ကို ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ရ​မ​လဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။
Acnes Foaming Wash ကို လ​က်ဝါး​ထဲ​သို့​​လုံေ​လာ​က်သော​ပမာဏ​ခ​န့်ညှစ်ယူ​ပါ။ ရ​ရှိ​လာေ​သာ​အြ​မှုပ်များ​ကိုသ​င်၏မျက်နှာြ​ပ​င်ေ​ပါ်​သို့​ စ​က္က​န့် ၃​၀ မှ တစ်မိ​နစ်ခ​န့်ေ​သချာ​စွာ​နှိပ်န​ယ်ပေး​ပါ။ သန့်စင်ချောမွတ်ေ​စ​ရ​န်ေ​ရများများြ​ဖ​င့်ေ​ဆးေြ​ကာ​ပါ။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င် ၂ြ​ကိ​မ် မှ ၃ြ​ကိ​မ် အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
အမာ​ရွတ်နဲ့​​အမဲ​စက်များ​ကို​ဘယ်လို​ကု​သရ​ပါ​မ​လဲ။ Acnes make up remover sheet ကို မျက်နှာ​သန့်စင်ရန်အ​တွ​က် အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ သလား။
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ​အတို​င်း လိုက်နာေ​ဆာင်ရွက်ပါ။
(၁) Acnes Creamy wash (သို့​) Acnes Foaming Wash ကိုမျက်နှာ​သစ်ပါ။
(၂) Acnes powder Lotion (သို့​) Acnes Scar Care ကို အမဲ​စက်ကု​သ​ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
(၃) Acnes Oil remover sheet ကို အဆီ​ထိန်း ရန်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။ AC10 ကို​အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​အတွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
ထို့​​အြ​ပ​င် ဆဲ​လ်ေ​သများ မိတ်ကပ်များ​ကို ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွ​က် Acnes Make up remover Sheet ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ သ​င်၏ လို​အပ်ချ​က်ေ​ပါ်​တွင်မူ​တ​ည်ပြီး အထက်ပါပ​စ္စ​ည်းများ​ကို​တ​စ်ေ​န့​ လျ​င်၂-ြ​ကိမ်မှ ၃-ြ​ကိ​မ်အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ေ​နရော​င်ေ​အာက်သွား​လာ လှုပ်ရှား​မည်ဆိုလျှ​င်ဦး​ထု​ပ်ေ​ဆာ​င်းရန်နှင့်နေေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်အ​သုံးြ​ပု​ ရန်မေ​မ့​​သ​င့်ပါ။
ထို့ြ​ပ​င် အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကို​ထိေ​ရာက်စွာ ကာ​ကွယ်နိုင်ရန်အ​တွ​က် အစား​အေ​သာ​က်ေ​န​အထိုင်အြ​ပ​င်အသား​အေ​ရ ထိ​န်းသိ​မ်းေ​သာ ပ​စ္စ​ည်းများ​ကို​ဂရု​တ​စိုက်သုံးေ​ပးြ​ခ​င်းြ​ဖင့်ထိေ​ရာ​က်ေ​သာ အကျိုးကျေး​ဇူး​ကို​ရ​ရှိေ​စ​မ​ည်ြ​ဖစ်သ​ည်။
Acnes Make up remover sheet ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ ရ​မ​လဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။
sheet တစ်ခု​ကို​ယူ​ပါြ​ပီးလျှ​င်ြ​က​မ်း​တ​မ်းပြီးေ​ချွှးေ​ပါက်များ​ပိ​တ်ေ​နြ​ပီး ၀​က်ြ​ခံ​နှ​င့်ဆား​၀​က်ခြံများ​ရှိ​သည်ဟု​ထ​င်ေ​သာ အစိတ်အ​ပို​င်းများ အား​လုံး​ကိုေြ​ဖး​ည​င်း​စွာ​ဖယ်ရှား​ပါ။တစ်ခါ​တစ်ရံ​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ တစ်ရက်လျှ​င်နှစ်ကြိမ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။
၀​က်ြ​ခံြ​ပည်တ​ည်ေ​သာြ​ပည်ဖုများ​ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် Acnes sealing gel ကို မျ​က်နှာ​တ​စ်ပြင်လုံး​လိ​မ်းြ​ပီး ၅ ရ​က်ေ​လာက်အြ​ကာ​မှာ ဘာေြ​ကာ​င့်မှ​န်း​မ​သိမျက်နှာ​နီ​ရဲ​လာြ​ပီး ယားယံ​လာ​ပါ​တ​ယ်။ ဘာ​ဆက်လုပ်သ​င့်သလဲ​တယ်ဆို​တာ အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ေ​ပး​ပါ။
Acnes Sealing gel ကို မှား​ယွ​င်း​စွာ သုံး​စွဲ​ခဲ့​​မိ​တာေြ​ကာ​င့်ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ၄​င်း​သ​ည် မျက်နှာ​တ​စ်ပြင်လုံး​သုံး​စွဲ​ရန်အ​တွ​က်မ​ဟုတ်ပါ။ြ​ပည်တ​ည်ေ​နသော ၀​က်ြ​ခံ​ဖုများေ​ပါ်​သို့​​တို့ြ​ပီးအသုံးြ​ပု​ရန်သာြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ အညွှ​န်း​အတို​င်း မှန်ကန်စွာြ​ပန်လည်အ​သုံးြ​ပုြ​ခ​င်ြး​ဖ​င့် ၀​က်ခြံများ​လျော့​​ပါး​လာ​ပါ​လိ​မ့်မ​ည်။ မျက်နှာ​သစ်ရန်အ​တွ​က် Acnes Cleanser ကို​အသုံးြ​ပုြ​ပီးအဆီြ​ပ​န်ြ​ခ​င်း​ကို ထိ​န်း​နိုင်ရန်အ​တွ​က် Acnes powder Lotion ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
ြ​ပည်တ​ည်ေ​နသော​၀​က်ြ​ခံ​ဖုေ​တွ​ကို​ဘယ်လို treatment လုပ်ရ​မ​လဲ။
ပထမ​ဦး​စွာ သ​င့်ရဲ့​မျက်နှာ​ကို AC3W or AC3F နဲ့​​စ​က္က​န့်၃​၀ အတွ​င်းနှိပ်န​ယ်ြ​ပီးေ​ရများများ​နှ​င့်ေ​ဆးေြ​ကာ​ပါ။ ဒုတိယ​အေ​နြ​ဖ​င့် ACOS အ န​ည်း​ငယ်ယူြ​ပီး​ကို လ​က်ချော​င်းေ​လးများြ​ဖ​င့်အဆီြ​ပ​န်ေ​သာေ​န​ရာနှ​င့်ေ​ချွှးေ​ပါက်ကျ​ယ်သောေ​န​ရာများ​ကို လိ​မ်းေ​ပး​ပါ။ေ​နာက်ဆုံး​အဆင့်အေ​နြ​ဖ​င့် ACD ကိုြ​ပည်တ​ည်ေ​နသော အဖု​ကေ​လးများေ​ပါ်​သို့​ တို့ေ​ပး​နိုင်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျှ​င်၂ - ၃ြ​ကိ​မ်အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
Erythromycin ကို အရင်က​၀​က်ြ​ခံ​ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် အသုံးြ​ပု​ခဲ့ေ​ပ​မ​ယ့်ထိေ​ရာက်မှု​မ​ရှိ​ပါ။ Acnes Sealing gel ကို​၀​က်ခြံ​အတွ​က်ေြ​ပာ်ြး​ပီး​ကု​သြ​ပီးေ​နာ​က် မျက်နှာ​တွင်ယား​ယံြ​ပီးအလွန်ပူ​စပ်သ​ကဲ့​​သို့​ ခံစား​ရ​ပါ​သ​ည်။ မည်သ​ည့်ပ​စ္စ​ည်း ကကျွန်ုပ်အေ​ရြ​ပား​နှ​င့်သ​င့်ေ​တာ်ြ​ပီး​အသုံးြ​ပု​သ​င့်သလဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။
အသား​အေ​ရ​ထိ​န်း​ပ​စ္စ​ည်း​တစ်ခု​ခု​ကို​အသုံးြ​ပုေ​တာ့​​မည်ဆိုလျင်အသုံး​မြ​ပု​မီ ဦး​စွာ​စ​မ်း​သပ်မှုြ​ပု​လုပ်ရ​န်လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ အက​ယ်၍ သင့်အသား​အေ​ရ​တွ​င်ပုံ​မှန်မ​ဟု​တ်ေ​သာြ​ဖစ်စဉ်မျာြး​ဖ​စ်ေ​ပါ်​လာ​ပါ​က အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်း​ကို ချက်ချ​င်းရပ်တ​န့်ပါ။ ၀​က်ခြံ ကို​အေ​ကာ်းင​ဆုံး​ကာ​ကွယ်ကု​သ​ရန်အ​တွ​က်Acnes Creamy washြ​ဖ​င့် မျက်နှာ​သစ်ပါ။ Acnes Oil solution ကို​အဆီ​ထိ​န်း​ရန်နှ​င့်Acnes sealong gel ကို ၀​က်ခြံကု​သ​ရန်အ​တွ​က် အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်း အထိေ​ရာက်ဆုံး အာ​နိ​သင်ကို​ရ​ရှိေ​စ​မ​ည်ြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ ၀​က်ြ​ခံများ​ပျောက်က​င်း​သွား​ပါ​က Acnes Sealing gel အသုံးြ​ပုေ​နြ​ခ​င်း​ကိုရ​ပ်ြ​ပီး Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က်ခြံေြ​ကာင့် ပျက်စီး​သွားေ​သာြ​ပန်လ​ည်ေ​ကာ​င်း​မွ​န်စေ​ရန်အ​တွ​က်ဆက်လက်အ​သုံးြ​ပု နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေ​နပ်မှု​အထူး​ရ​ရှိ​မည်ဟု မျှော်လ​င့်ပါ​သ​ည်။
Acnes Oil Remover paper ကို​ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ရ​မ​လဲ။
အဆီများေ​သာ T zone area (သို့​) ချွေးေ​ပါက်များ​ရှိ​ပိုလျှံေ​နသော​အဆီများ​နှ​င့်ဖုန်များ ကို​ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွ​က်အသုံးြ​ပု နိုင်ပါ​သ​ည်။ အချိန်မေ​ရွး​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
ကျွန်ုပ်က​အသား​အေ​ရ​က​အဆီြ​ပန်တဲ့​ အမျိုး​အစားြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ၀​က်ခြံများ​ကို ဘယ်လို​ကု​သရ​မ​လဲဆို​တာ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီးေြ​ပာြ​ပေ​ပး​ပါ။
၁. Acnes Foaming Wash ကို​ချွေးေ​ပါက်တွ​င်း​ရှိ ဖုန်အ​ညစ်အေြ​ကးများ​ကို​ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
၂. ပိုလျှံေ​နသော​အဆီများ​ကို​ထိ​န်း​ရန်နှ​င့်ချွေးေ​ပါက်များ ကျ​ဉ်းရ​န်၊အေ​ရြ​ပား​အစို ဓါတ်ကို​ထိ​န်း​ညှိေ​ပး​ရန်အ​တွ​က် Powder Lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။
၃. ၀​က်ြ​ခံြ​ဖ​စ်သော​ဗက်တီး​ရီး​ယား​ပိုးများ​ကို ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် Acnes Sealing Gel ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။ ၄​င်းAcnes series များ​ကို တ​စ်ေ​န့​လျ​င်၂ြ​ကိမ်မှ​၃ြ​ကိမ်အ​ထိ​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ထို့ြ​ပ​င်ေ​န့​​စ​ဉ်အစား​အေ​သာက်အေ​န​အထို​င်င်္နှင့်အသား​အေ​ရ​ထိ​န်းပ​စ္စ​ည်းများ အသုံးြ​ပု​ပါ​က​ပိုမိုြ​ပီး​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​ပါ​သ​ည်။
အဆီြ​ပ​န်ေ​သာ​အသား​အေ​ရ​အမျိုး​အစားြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ မိတ်ကပ်ကို​လ​ည်းေ​န့​​စဉ်အ​သုံးြ​ပု​ပါ​တ​ယ်။ မ​ည်သ​ည့် Acnes ပ​စ္စ​ည်း​အမျိုး အစား​ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ သလဲ။
၁. Acnes Foaming Wash ကို ချွေးေ​ပါက်တွ​င်း​ရှိ ဖုန်အ​ညစ်အေြ​ကးများ​ကို ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
၂. ပိုလျှံေ​နသော​အဆီများ​ကို ထိ​န်း​ရန်နှ​င့်ချွေးေ​ပါက်များကျ​ဉ်းရ​န်။ အေ​ရြ​ပား အစို​ဓါတ်ကို​ထိန်းညှိေ​ပး​ရန်အ​တွ​က်Powder Lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။
၃. ၀​က်ခြံြ​ဖ​စ်ေ​သာ ဗက်တီး​ရီး​ယား​ပိုးများ​ကို ကု​သရ​န်အတွ​က် Acnes Sealing Gel ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။ ၄​င်း Acnes series များ​ကို တ​စ်ေ​န့​လျ​င်၂ြ​ကိမ်မှ​၃ြ​ကိမ်အ​ထိ​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
ကျ​မ​ကေ​တာ့​ Acnes C10 ကိုေ​ရာ​င်း ချေ​န သူ​တ​စ်ေ​ယာ​ကကဖြစ်ပါ​တ​ယ်။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့် C10 ရဲ့​​လု​ပ်ေ​ဆာင်ချ​က်နဲ့​ ထိေ​ရာက်မှု​အေြ​ကာ​င်းကိုေ​သချာ​နား​လည်မှု​မ​ရှိ​လို့​ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး​ကူညီေ​ပး​နိုင်မ​လာ​ရှ​င့်
AC 10 သည်သ​န့်စ​င်ပြီး ဗီ​တာ​မင်စီ ၁​၀%ေ​ဖ်ာမြူ​လာြ​ဖ​င်ထုတ်လုပ်ထားြ​ပီး အေ​ရြ​ပား​အတွ​င်း​ပို​င်းအလွှာ​ထိ​ထိုးေ​ဖာ​က်နို်​င်ြ​ပီး အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကို ဖယ်ရှား​သန့်စ​င်ေ​ပးြ​ပီး melanin များ​ကိုတားဆီး​ဖယ်ရှား​နိုင်စွ​မ်း​ရှိ​သ​ည်။ ထို့ေြ​ကာ​င့်​​အမဲ​စက်များ ကို​တေြ​ဖးေြ​ဖး​လျော့​​ပါး လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။အသား​အေ​ရ​အတွ​က်Collagen များ​ကိုေ​ထာက်ကူ​အားေ​ပးြ​ပီး ၀​က်ြ​ခံ​အမာ​ရွတ်များ​ကို​လ​ည်း ချောေ​မွ့​ပျာက်က​င်းေ​စ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျှင်နှ​စ်ြ​ကိ​မ် အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ (မ​နက်ည) ။ အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကို​ကု​သေ​န​စဉ်တွ​င် စိတ်ရှည်သ​ည်း​ခံ​ရန်လို​ပါ​သ​ည်။ေ​နရော​င်ြ​ခ​ည်ေ​အာက်သွား​လာ​လှုပ်ရှားမည်ဆိုလျှ​င် ဦး​ထု​ပ်၊ Mask သို့ေ​နေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်မ်တစ်ခု​ခု အသုံးြ​ပု​သ​င့်​​ပါ​သ​ည်။ေ​ရ​ခဲေ​သ​တ္တာ​၏​သန့်​​ရှ​င်းေ​သာ tray ထဲ​သို့​​ထ​ည့်ြ​ပီး အသုံးြ​ပု​နို​င်ြ​ပီးေ​နရော​င်ြ​ခ​ည်နှ​င့် တိုက်ရိုက်ထိြ​ခ​င်း​မှ​ရှာ​င်ြ​ကဉ်ရ​ပါ​မ​ည်။
AC10 ရဲ့​​လု​ပ်ေ​ဆာင်ချက်နှ​င့်​​ထိေ​ရာက်မှု က​ဘာ​လဲ။
AC 10 သည်သ​န့်​​စ​င်ြ​ပီး ဗီ​တာ​မင်စီ ၁​၀%ေ​ဖာ်ြ​မူ​လာြ​ဖ​င့်​ထုတ်လုပ်ထားြ​ပီး အေ​ရြ​ပား​အတွ​င်း​ပို​င်း​အလွှာ​ထိ​ထိုးေ​ဖာက်နို​င်ြ​ပီး အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ ကို​ဖယ်ရှား​သန့်​​စ​င်ေ​ပးြ​ပီး melanin များ​ကိုတားဆီး​ဖယ်ရှား​နိုင်စွ​မ်း​ရှိ​သ​ည်။ ထို့ေြ​ကာင့်အမဲ​စက်များ​ကို တေြ​ဖးေြ​ဖး​လျော့​​ပါး​လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။ အသား​အေ​ရ​အတွ​က်Collagen များ​ကိုေ​ထာက်ကူ​အားေ​ပးြ​ပီး ၀​က်ြ​ခံ​အမာ​ရွတ်များ​ကို​လ​ည်း ချာေ​မွ့​ပျောက်က​င်းစေ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျှင်င်္နှစ်​ကြိ​မ်အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ (မ​နက်ည) ။ Ac 10 ကို​အမဲ​စက်များ ကု​သ​ရာ​နှ​င့်အသား​အေ​ရချောေ​မွ့​​တ​င်း​ရ​င်းေ​စ​ရ​န် အတွက်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။တ​စ်ေ​န့​လျှ​င် နှ​စ်ြ​ကိမ်မ​နက်ည မျက်နှာ​သ​စ်ြ​ပီး​တို​င်း အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
AC 10 တွင်ပါ​၀​င်ေ​သာ ဗီ​တာ​မင်စီ​၏ေ​ဆာင်ရွက်မှုအေြ​ခ​အေ​န​ကို ရှ​င်းပြ​ပါ။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
AC10 တွင်ပါဝင်သော ဗီတာမင်​စီ​၏ လု​ပ်ဆောင်​ချက်များ
1. Melaninြ​ဖ​စ်ေ​ပါ်ေ​စေ​သာ အေြ​ခ​အေ​နများး​ကို တား​ဆီေ​ပးြ​ပီး Melanin'sြ​ဖ​စ်ေ​စေ​သာ အေ​ရာ​င်ခြယ်ဆဲလ်များ​ကို ဖယ်ရှားေ​ပး​သန့်စင်ပေးခြင်း
3.အသား​အေ​ရ​တ​င်းရင်းမှုရှိစေရန်အတွက်ဆဲလ်များ​၏ လု​ပ်ဆောင်ချက်များ​ကို အားြ​ဖ​ည့် တိုး​တ​က်စေခြင်း
4.ေ​သွး​လှ​ည့်ပတ်မှု​ကိုေ​ကာ​င်း​မွ​န်စေြ​ပီး အသား​အေ​ရ​ကိုြ​ကည်လ​င်ေြ​ပာ​င်းလဲေ​စြ​ခ​င်း၊
5. အဆီြ​ပ​န်ခြင်းကို ထိ​န်းညှိုေ​ပး​နို​င်ခြင်းတို့​​ပဲြ​ဖစ်ပါ​တယ်ရှ​င်။
အမဲ​စက်နှ​င့်အမာ​ရွတ်အ​တွ​က်AC 10 ကို​အသုံးြ​ပု​လို့​​ရ​နိုင်ပါ​သလား​ရှ​င်။
Acnes C10 ကို​အမဲ​စက်နှ​င့် အမာ​ရွတ်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ြ​ပွန်ကေ​လး​ကို​ညင်သာ​စွာ ဖိြ​ပီး​တစ်စက်မှ​နှစ်စက်ခ​န်လက်ဖ​၀ါး​ထဲ​သို့​​ထ​ည့်ပြီးမျက်နှာြ​ပင်ေ​ပါ်​သို့​လ​က်ချော​င်းေ​လးများြ​ဖ​င်ေြ​ဖး​ည​င်းစွာ​နှိပ်နယ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျှင်နှ​စ်ကြိမ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။
AC C10 ကို နှ​စ်ြ​ကိမ်ထက်မ​က အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား၊ တ​စ်ေ​န့​လျှ​င်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုြ​ပီး အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား။ AC 10 ကို​အသုံးြ​ပုြ​ပီးလျှ​င် ဗီ​တာ​မင်ခ​ရင်မ်ကိုေ​ရာ​အသုံ:ြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား။ မျက်နှာေ​ပါ်​က​၀​က်ခြံေ​တွ​ကို ကာ​ကွယ်ဖို့​​ဘယ်ပ​စ္စ​ည်း​ကိုေ​ရွးချယ်အ​သုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​လဲ။
AC 10 ၏ အသုံးြ​ပု​ရန်သ​င့်တင့်လျောက်ပတ်သော​ပမာဏ​မှာ ၁-စက်မှ ၂-စ​က်ဖြစ်ပါ​သ​ည်။ သို့ေ​သ်ာသင်အ​လို​ရှိလျ​င် ၂-စက်ထက်ပို​၍ေ​သ်ာလ​ည်းေ​ကာ​င်း၊ ၂-ြ​ကိမ်ထ​က်ပိုြ​ပီးေ​သ်ာလ​ည်းေ​ကာ​င်းအသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ Ac Vitamin cream ကို​လ​ည်း AC 10 သုံးြ​ပီး ၁​၀-မိ​နစ်ခ​န့်အြ​ကာ​တွင်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ၀​က်ြ​ခံ​ကာ​ကွ​ယ်ြ​ခင်လျှ​င် Oxy deep wash နှ​င်မျက်နှာ​သ​စ်ြ​ပီး အဆီ​ထိ​န်းပ​စ္စ​ည်းတစ်ခု​ခု အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်ြး​ဖ​င့်ကာ​ကွယ်နိုင်ပါ​သ​ည်။ ဤ​အေြ​ကာ​င်း​အရာ​နှ​င့်ပတ်သ​တ်ြ​ပီး ကျေ​နပ်လိ​မ့်မည်ဟု​မျှော်လ​င့်ပါ​သ​ည်။
Acnes C10 ဟာ ၀​က်ြ​ခံ​များကိုပျောက်ကင်းေ​စနိုင်​ပါ​သလား။
သန်ံစင်ပြီး Vitamin Cေ​ဖာ်ြ​မူ​လာြ​ဖ​င့် အေ​ကာ​င်းဆုံးေ​ဖ်ာစပ်ထားေ​သာေြ​ကာ​င် AC 10 ကို အသုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​သ​ည်။ အေ​ရြ​ပား​၏​ဖွဲ့​​စ​ည်း​တ​ည်ေ​ဆာက်ရာ​တွ​င်အဓိ​ကကျေ​သာ အပို​င်ြး​ဖ​စ်ေ​သာ keratin layer ထိ​ထိုးေ​ဖာက်နိုင်စွ​မ်းရှိြ​ပီး အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကို ဖယ်ရှား​သန့်စင်နိုင်ပါ​သ​ည်။ အမဲ​စက်များ​ကိုေ​မှး​မှိ​န်ေ​စြ​ပီး မြ​ဖ​စ်ေ​ပါ်ေ​အာင်လ​ည်း​တားဆီး​နိုင်စွ​မ်းရှိ​ပါ​သ​ည်။ ထို့ေြ​ကာ​င့်အမဲ့​​စက်များ ကို တ​စ်ဖြေးေြ​ဖးြ​ဖူ​ ၀​င်းေ​တာက်ပ​လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။ အသား​အေ​ရ​ကို တ​င်းရ​င်းေ​စြ​ပီး ချောေ​မွ့​​လှ​ပ​လာေ​စ​သ​ည်။
အမဲ​စက်နှင့်​အမာရွတ်များအတွ​က်AC 10ကို အချိန်မည်မျှကြာသည်အထိအသုံးပြုရမည်​န​ည်း။
၄​င်း​တို့​​ကို​လျှော့ချ​ရန်အ​တွ​က် ၄-ပတ်ခ​န့် အချိန်ယူ​ရ​ပါ​မ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျှ​င်နှစ်ကြိ​မ် မ​နက်တ​စ်ကြိ​မ်ည​တ​စ်ကြိမ်အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ ကု​သေ​န​စဉ်အ​တွင်းစိတ်ရှည်ရ​န်လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ ထို​သို့​​ကု​သ​မှု​ ခံယူေ​န​စဉ်အ​တွ​င်းေ​နရော​င်ေ​အာက်သို့​​သွားလျှ​င် ဦး​ထု​တ်၊ Mask နှ​င့်ေ​နေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်မ်ကို​ပါ​ဂရု​တစ်စို​က် သုံးေ​ပးလျင်ပိုြ​ပီး​ထိေ​ရာ​က်စေ​ပါ​သ​ည်။
ကျ​မ​၏​နှာေ​ခါ​င်း​တွ​င်​နေေ​လာင်ခံ​ထား​ရသ​ည်အေြ​ကာ​င်း​မှာ အလုပ်အ​တွ​က်ေ​န​ပူ​ထဲ​တွင်မြ​ကာ​ခဏ သွား​လာ​ရေ​သာေြ​ကာ​င်ြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ ထို​ကဲ့​​သို့ေ​သာေ​နေ​လာင်ြ​ခ​င်းဒဏ်ရာ​အတွ​က် AC 10 ကို အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား။ သိ​ပါ​ရေ​စ။
AC 10 ကိုေ​နေ​လာင်ဒဏ်ထိေ​သာ​အသား​အေ​ရေ​ပါ်​သို့​ အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ လို​အပ်ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န့်တစ်စက်မှ နှစ်စ​က်)ြ​ပွန်ကေ​လး​ကိုေြ​ဖး​ညှ​င်းစွာ​ဖိ​ညှ​စ်ြ​ပီးလ​က်ဝါး​တွ​င်းသို့​​ထ​ည့််ပါြ​ပီးလျှ​င် မျက်နှာြ​ပ​င်ေ​ပါ်​သို့​ လ​က်ချော​င်း​ကေ​လးများြ​ဖ​င့် ညှင်သာ​စွာ​နှိပ်န​ယ်ပြီး အသား​တွ​င်း​စိ​မ့်ဝင်​အာင်လိ​မ်းပါ။ တ​စ်ေ​န့​လျှ​င် နှ​စ်ကြိ​မ်(မ​နက်ည) အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​ရန်အ​တွ​က်ေ​နေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်မ်ကို​ပါ​တွဲ​ဖက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
ကျော​က်ေ​ပါက်မာ​ကဲ့​​သို့ေ​သာ ချိုပ်ခွက်အ​မာ​ရွတ်များ​သ​ည်ဝ​က်ြ​ခံေြ​ကာ​င့်ြ​ဖစ်ခဲ့​​သည်ဆိုလျှ​င် AC 10 ကို အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ ထို​သို့​​မ​ဟုတ်ပဲ​အြ​ခားေ​သာ အေြ​ကာ​င်းအရာများ​ကြောင့်ြ​ဖစ်ခဲ့​​သည်​ဆို​လျှင် ဆရာဝန်သို့​ Beauty Salon များတွင် သွားေ​ရာ​က်ြ​ပီးေ​ဆး​ကု​သ​နိုင်​ပါ​သ​ည်။
ကျ​မ​၏​နှာေ​ခါ​င်း​တွ​င်ေ​နေ​လာင်ခံ​ထား​ရသ​ည့်အေြ​ကာ​င်းမှာ အလုပ်အ​တွ​က်ေ​န​ပူ​ထဲ​တွင်မြ​ကာ​ခဏ သွား​လာ​ရေ​သာေြ​ကာင့်ဖြစ်ပါ​သ​ည်။ ထို​ကဲ့​​သို့ေ​သာေ​နေ​လာ​င်ခြ​င်းဒဏ်ရာအတွ​က် AC 10 ကို အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား။ သိ​ပါ​ရေ​စ။
AC 10 ကိုေ​နေ​လာင်ဒဏ်ထိေ​သာ​အသား​အေ​ရေ​ပါ်​သို့​ အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ လို​အပ်ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န် (တစ်စက်မှ နှစ်စ​က်)ြ​ပွန်ကေ​လး​ကိုေြ​ဖး​ညှ​င်း​စွာ​ဖိ​ညှ​စ်ပြီး လ​က်ဝါးတွင်းသိုထည့်ပါ။ြ​ပီးလျှ​င်မျက်နှာြ​ပ​င်ေ​ပါ်​သို့​ လ​က်ချော​င်းကေ​လးများြ​ဖ​င့် ညှင်သာ​စွာ​နှိပ်န​ယ်ြ​ပီး အသား​တွ​င်း​စိ​မ့်ဝင်ေ​အာင်လိ​မ်းပါ။ တ​စ်ေ​န့​လျှ​င်နှစ်ကြိ​မ်(မ​နက်ည) အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​ရန်အ​တွ​က်ေ​နေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်မ်ကို​ပါ​တွဲ​ဖက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
ကျွန်တော်မှာ အမဲ​စ​က်ဖြစ်နေတာ ၇ နှ​စ် ၈ နှစ်ရှိ ခဲ့​​ပါြ​ပီ။ AC 10 ကို အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလား။
အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ အချိန်ယူြ​ပီး ကု​သ​ရန်လဲ​လို​ပါ​သ​ည်။ အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ ကု​သချိန်တွင်စိတ်ရှည်ရန်လ​ည်း လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ေ​နရော​င်ေ​အာ​က်သွား​လာ​လှုပ်ရှား​မည်ဆိုလျှ​င်ေ​နေ​လာင်ခံ​ခ​ရင်မ်နှ​င့်တွဲ​ဖ​က်အသုံးြ​ပုလျှင် ပိုြ​ပီး​သ​င့်တော်ပါ​သ​ည်။
ကျ​မ​အမဲ​စက်များ​အတွက်လိ​မ်းရ​န် AC 10 ကို​၀ယ်ခဲ့ြ​ပီး​ပါြ​ပီး ။ တ​စ်နေ့လျ​င်ဘယ်နှ​စ်ကြိမ်အ​သုံးြ​ပု​လို့​​ရသ​လဲ။ မျက်နှာ​သစ်ဆ​ပ်ြ​ပာ​ကိုေ​ရာ ဘယ်လို​အမျိုး​အစား​ထဲ​ကသုံး​သ​င့်ပါသလဲ​ရှ​င့်...
Acnes C10 အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​အတွ​က် တ​စ်ေ​န့​လျင်နှ​စ်ြ​ကိ​မ်အသုံးြ​ပု နိုင်ပါ သ​ည်။ (မ​နက်တ​စ်ြ​ကိ​မ်ည​တ​စ်ကြိ​မ်)။ ၄​င်း​အြ​ပ​င် Acnes Vitamin Cleanser ကိုေ​န့​​စ​ဉ်သုံးမျက်နှာ​သစ်အြ​ဖ​စ် အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ Rohto Mentholatum မှ ထုတ်လုပ်လို​က်ေ​သာ ၄​င်းထုတ်ကုန်အ​သစ်မှာ ၀​က်ခြံ​ကာ ကွယ်ရန်အ​ထိေ​ရာက်ဆုံး ပ​စ္စ​ည်းြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။
၄​င်း​တွ​င်ဗီ​တာ​မ​င် E,C, B3, B5 များ​ပါ​၀​င်ြ​ပီး အသား​အေ​ရ​ကိုြ​ပန်လ​ည်ပြုြ​ပင်နိုင်သ​ည့်အြ​ပ​င်အမဲ​စက်များ ကို​တ​စ်ေြ​ဖးေြ​ဖးေ​မှး​မှိန်လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။
Home|Products|News & Activities|FAQ|About Us|Contact Us
Copyright © 2013 , powered by iBiz. All Rights Reserved.